Dagaala dib uga qarxay waddanka koofur sudan – The Voice of Northeastern Kenya
Dagaala dib uga qarxay waddanka koofur sudan
Waxa dalka South Sudan dib ugu qarxay dagaala u dhexeeya ciidamada tageersan madaxweynaha waddankaas Salva Kiir iyo kuwa daacada u ah madaxweyne kuxigeenkiisa Riek Machar waxana ilaa iyo hadda lagu soo waramaya in ay dagaaladaas ay ku geeriyooden 3 ruux.
Steven Lodu Onseimo oo ah wasiirka warfaafinta ee deeganka Yei oo ah goobta ay shalay dagaalada ku dhex mareen labadan ciidan ee iska soo horjeeda ayaa waxa u sheegay in u galaaftay noolasha 3 ruux oo isugu jiro 2 qof oo rayid ah iyo 1 qof oo isna ka tirsan ciidamada dagaalamaayay.
Dad goobjoog u ahaa dagaaladan dib uga qarxay waddankaas koofur sudan ayaa waxa ay sheegen in dagaaladaas ay ka dhaceen deeganka Yei oo ku yaala wadada isku xirto magaala madaxda waddankaas ee Jubba iyo waddanka ay jaarka yihiin ee Ugandha.
Ciidamada dawladda iyo kuwa mucaaradka ayaa midba midka kale ku eedeynaya in u isaga hurinaayo dagaalada ka taagan dalkaas.
Wasiirka warfaafinta degaanka Yei ayaa waxa u sheegay in ciidamada mucaaradka ay weerar gadmo ah ay ku qaaden kolonyo ay wateen ciidamada dawladda.
Dhanka kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maalinti jimacaha waxa ay ammar ku bixiyeen in waddankaas la geeyo 4,000 oo ah ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay kuwaas oo gacan ka siin doona hawlgalada ka hortaga in la waxyeeleyo rayidka dalkaas ay horey uga wadeen 12,000 oo iyagana ahaa ciidamada qaramada midoobay ee halkaas sii joogay.
Xukumadda Juba ee madaxweyne Salva Kiir ayaa waxa ay ka soo horjeeda talaabada ciidamo dheerad ah waddankeeda lagu geynaayo iyado taas ku micneeysay in ay tahay qorshe ay qaramada midoobay ku dooneyso in ay kula wareegto maamulka waddankaas.
Ilaa iyo hadda ayaa waxa dagaalada ka socda waddanka koofur sudan ku barakacay dad tiradooda lagu sheegay in ay kor u dhaafeysa 2 milyan oo qof kuwaas oo qaarkood u cararay waddamada ay koofur sudan deriska yihiin
South Sudan ayaa waxa ay lugaha la gashay dagaalada sokeye sanada 2013-ka kadib marki u qilaaf soo kala dhex galay madaxweyne Salva Kiir iyo kuxigeenkiisa Riek Machar.
← Kooxda Boko Haram oo soo bandhigtay videoga gabdhihi ay ka qafaashen Chibok
Odayaasha beesha wayu oo sheegay in ay tageeri doonan gavane Ukur Yatani →